« Manimba » -
AccueilTresaka« Manimba »
07/05/2018 admintriatra Tresaka 0
Diso mihitsy ny filazana fa ny vahoakan’Antananarivo iray manontolo no mamaly ny antson’ireo depioten’ny fanovana amin’ny hetsika hataony etsy amin’ny 13 mey Analakely. Nipoitra sy niharihary izany ny faran’ny herinandro teo. Satria dia nampiseho mihitsy ny olona fa faly rehefa nilamindamina ny hetsik’ireo mpanao fihetsiketsehana. Maro ny sosotra amin’ny fanohintohinana hataon’ireo mpanao fihetsiketsehana. Hay ny olona tsy faly amin’ilay fanelingelenana ny asa fitadiavany. Izay manana haino aman-jery ihany moa no toa ny hoe manana ny marina, ka maro no diso hevitra amin’ireny voalazan’ny haino aman-jerin’ny mpanongam-panjakana ireny.
Tsarovy fa eo Analakely avokoa ny ankamaroan’ny fitadiavam-bolan’ny sarangan’olona maro : « manomboka amin’ny mpivarotra composé, ny mpivarotra amoron-dalana, ny mpivarotra finday ary mpivarotra fiara… ». Hita ho toy ny miaina anaty fahafahana izy ireo rehefa tsy mandrahona hanakorontana ireo mpanao fihetsiketsehana. Mitebiteby kosa rehefa miakatra ny maripànan’ireo mpanao fihetsiketsehana. Maro amin’ireo mpiasa eny an-toerana mihitsy no mivavaka mba hitsaharan’io hetsika io haingana satria tena manelingelina tanteraka ny asa fitadiavana. Maro mihitsy no efa mametraka fanantenana ny hivahan’io olana io amin’izao fahatongavan’ireo mpanelanelana vahiny ireo.
Tsy mba mieritreritra izany asa fitadiavan’olona izany tokoa mantsy ireo depioten’ny fanovana. Hodiany tsy hita tsotra izao fa fototry ny fiveloman’ny Malagasy maro no voatohintohina amin’io hetsika hataon’izy ireo io. Tia tena ary tsy mijery ny tombontsoan’ny olona, fa dia ny tombontsoan’ny tenany ihany no hitany.
Tokony handraisana fepetra ihany koa izy 73 mianadahy ireo. Nanomboka tamin’io fotoana nitarihany hetsika teo Analakely io dia tokony tapahina koa ny karamany mba hahitany tsara ny ngidin’izany fahasahiranan’ny raim-pianakaviana na renim-pianakaviana tapaka fihinanana izany.
Tsy izany anefa no mbola mitranga aloha amin’izao, satria mbola mahazo tsy tapaka ny karamany ireo depiote, sady tsy mamonjy fivoriana no manimba ny fitadiavan’olona isan’andro ireo.